Faayilii - Mormii deeggartoonni paartilee mormituu Moqaashihootti geggeessan, Guraandhala 19, 2021
Mootummaan Federaalaa Somaaliyaa dippiloomatonni biyyattii keessa jiran dhibba siyaasaa keessoo biyyattii gidduu akka hin hin seenne waamicha dhiheesse. Ka Yunaayitid Isteetis, Gamtaa Awurooppaa fi waajira Tokkummaa Mootummootaa Somaaliyaa keessaa dabalee bakka bu’oonni qaamota adda addaa, yeroo taayitaa Prezidaantii Somaaliyaa yeroon bulchiisa isaa dhumatee walakkaannis tahe guutummaatti dheeresuu akka hin deggerre dubbatanii booda, Ministarri Odeeffannoo Somaaliyaa, Osmaan Duubee, hubachiisa kana baasan.
Mootummaan isaanii akka waahiloonni isaa idil-addunyaa akka qajeelfamoota seera sadarkaa addunyaatti birmadummaa fi daangaa biyyummaa Somaaliyaa kabajan kan irraa eegu tahuu dubbatan, Duubeen. Itti dabaluudhaanis, dhimmoota keessoo biyya birmaduu tokko keessa seenuun gochaa seeraa alaa ti, jedhan – Duubeen.
Prezidaantiin Somaaliyaa maqaa masoo “Farmaajoo” jedhamuun beekaman Mohammed Abdullaahii Mohammed akka dafanii filannoo geggeessaan ka dhiibbaan sadarkaa Addunyaa irra kaa’amaa jiru yoo tahu, aangawoonni filannoo filannicha tursiisanii, qaamoota siyaasa biyyattii keessaa qooda qaban gidduutti akka dura walii-galteen uumamu carraaqqii godhaniyyuu mariiwwan geggeessaman haga ammaatti hin milkoofne.